Samsung ဖုန်းများ မြန်မာစာစနစ်ပြောင်းနည်း ~ Free Mobile Sharing
Samsung ဖုန်းများ မြန်မာစာစနစ်ပြောင်းနည်း
3:51 PM Android Tutorials, သိမှတ်ဖွယ် 18 comments
မိမိလုပ်လိုသော ဖုန်းအမျိုးအစားအတွက် မြန်မာစာစနစ်ပါတဲ့ 1 GB ကျော်ဖန်ဝဲကို ဒေါင်းရမှာအဆင်မပြေတဲ့သူများကတော့ မြန်မာစာစနစ်ရအောင် ကိုယ့်ဖုန်းရဲ့အထဲမှာ အောက်ကနည်းအတိုင်း မြန်မာစာစနစ်ပါအောင် လုပ်ဆောင်နိူင်ပါတယ် ။
ပြီးရင် ပုံမှာ ဝိုင်းပြထားသည့်အတိုင်း နောက်ကနေ my_MM; နဲ့
နောက်တစ်ကြောင်းမှာ my; ဆိုတဲ့စာလေးကို ဖြည့်ပေးလိုက်ပါ ။
ပြီးရင် rw - r - r ပေးလိုက်ပါ ။
Naymyo TCK October 23, 2013 at 7:47 PM
I try with my samsung s4 mini (GT-I9190) stay can't.
sure my device including zawgyi fort with original.
nay one can help?
aaa November 24, 2013 at 6:04 AM
root explorer လိုချင်ပါတယ်။
language .xml ဖိုင်ကိုရှာတာ မူးနေပြီ အနီစပ်ဆုံးနေရာလေးဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာညွှန်ပေးပါလား R/O တော့ပြောင်းထားပြီးပြီး
Unknown February 8, 2014 at 10:15 PM
system ထဲက csc ထဲကို ထပ် ဝင် ရင် language.xml ကို တွေ့တယ်
အကုန် လုံး လုပ်ပြီးပြီ။language.ထဲ မှာ လည်း myanmar(zawgyi) ကို လုပ်ပြီးပြီ။လေးထောင့် တုံး တွေ ပဲ ပေါ် နေ တုန်းပဲ။ကူညီပါဦး ညီအကိုတို့။
Unknown February 8, 2014 at 11:44 PM
maung zaw zaw February 11, 2014 at 7:56 AM
အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ် ဒါပေမဲ samsung keyboard မှာမြန်မာလိုရွေးစရာမပါဘူးအကိုရေ
Samsung keyboard settings ထဲက selet input languages ထဲ မှာကြည့်ကြည့်ပါဦးလား
maung zaw zaw February 12, 2014 at 3:53 AM
Tab2 7.0 android 4.1.2မှာ​ကေားရမလား
maung zaw zaw February 12, 2014 at 3:55 AM
Anonymous February 26, 2014 at 7:24 AM
4.2.2 နဲ့ အထက်မှာပဲ ရပါတယ်
aung ko Win March 31, 2014 at 9:25 AM
အကို ပြောသလို နှခုလဲ ထည့်ပိပိ rw r r လဲ ပေးပိပိ ပါဝါပြန်ချပ်ိ
ပြန်ဖွင့်တာ samsaung keybroad setting မှာ myanmar(zawgyi)မပေါ်ဘူးဗျ ဘာလို့လဲ မသိဘူး ပြောပြ ပေးပါဦး အကို
DjjjoeMan(MMLG) September 8, 2014 at 12:24 AM
စမ်ဆောင်းရဲ့ ကိုယ်ပိုင်မြန်မာကီးဘုတ်ကို ဒီမှာဖတ်ရှု လေ့လာပြီးထည့်လိုက်ပါ အဆင်ပြေသွားပါမယ် ကိုAung Ko Win
linlin June 21, 2014 at 4:42 AM
SAMSUNG GALAXY S DUOS GT-S7562 ရောမရဘူးလားကိုစိုင်းသူ
A Thae Lay September 6, 2014 at 9:28 AM
ဟုတ်တယ် အခုပဲ လုပ်ကြည့်နေတာ keyboard မှာမရဘူး language မှာလည်း myanmar(zawgyi) လို့ မပေါ်ပဲ burmese လို့ ပေါ်တယ် keyboard မှာကျတော့ဘာမှ မပါဘူး....language မှာ burmese ရွေးတာ မြန်မာစာစနစ်ရတယ် keyboard ကျတော့ မရဘူး ကူညီပါအုံး အကို
စမ်ဆောင်းရဲ့ ကိုယ်ပိုင်မြန်မာကီးဘုတ်ကို ဒီမှာဖတ်ရှု လေ့လာပြီးထည့်လိုက်ပါ အဆင်ပြေသွားပါမယ် A Thae Lay